Allgedo.com » Barakacii ugu balaarnaa oo ka dilaacay Gobolka Jubbada Hoose iyo Al Shabaab oo Kenya markale u hanjabtay
Barakac xoogan ayaa wuxuu maanta ka soconayaan qeybo ka mid ah Gobolka Jubbada Hoose, iyadoo shacabka ku dhaqan Gobolkaasi ay soo wajahday cabsi xoogan, oo ku aadan dhinacyada isku haaya.
Barakac balaaran ayaa waxay maanta ka soconayaan gudaha iyo duleedka ee degmada Badhaadhe ee Gobolka Jubbada Hoose, iyadoo barakac kalana ay ka jiraan deegaano hoos tagga deegaanka Kulbiyow ee Gobolka Jubbada Hoose.
Shacabka ku dhaqan deegaanada Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay wadaan barakac balaaran, iyagoo markaasi isaga baxaaya deegaanadaasi, si’ay wax yeelo uga soo gaarin dagaalada u dhaxeeya quwadaha isku haaya Gobolka Jubbada Hoose.
Shacabka ku dhaqan deegaanada Ceelka iyo Handhaare ee degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa maanta la-arkaayaa iyaoo deegaanadaasi uga baxaaya si raxan raxan ah.
haddii aad shacabka wax ka weydiiso sababaha ay u barakacayaan, ayaa waxay ku sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid cakiran, waxay kaloo ku sheegayaan inaysan dooneen inay ku wax-yeeloobaan dagaalada u dhaxeeya, dhinacyada isu haaya Koonfurta Somaliya.
Dhanka kale Gudoomiyaha Maamulka Gobolada Jubbooyinka ee Xarakada Al Shabaab Sheekh Abuukar Cali Aadan, ayaa wuxuu maanta markale uu hanjabaado xoogan u jeediyay Dowladda Kenya, isagoo xusay inay nabaro halis ah gaarsiin doonaan.
Sheekh Abuukar Cali Aadan oo aan soo hadal qaadin barakaca ka soconaaya deegaano hoos tagga Gobolka Jubbada Hoose, ayaa wuxuu shacabka ku dhaqan Gobolada Jubbooyinka uu ku booriyay, inay hubka qaataan oo ay la-dagaalamaan waxa uu ugu yeeray cadowga.
Iskusoo wada-duuboo Dowladda Kenya ayaa waxay shalay duqeymo xoogan ay ka geysatay deegaano ka tirsan degmada Badhaadhe, sida Ceelka iyo Handhaare, isla-markaana waxay duqeymaha ay ku garaacday goobo ay Shabaabku ku sugnaayeen, laakiin lama sheegin khasaaraha ka dhashay inta uu la’eg yahay.
1 Jawaab " Barakacii ugu balaarnaa oo ka dilaacay Gobolka Jubbada Hoose iyo Al Shabaab oo Kenya markale u hanjabtay "
cagmadhige maxaad ku xaqiijeysaa in ay shabaab ku sugnaayeen meesha uu cadawga duqeeyay xitaa maadan dhihin sida la sheegay ee ma adigaa taagnaa goobta mida kale warar kaagii horana kuma aaddan soo gudbin hadii ay sidaa tahay waxaa kugu dhaboobaya tuhunkii aan horayba kuugu tuhmay in aad dhinac tahay oo markaa webkiina aad ka dhigeyso dhinac arintaas oo webkan aan horay looga baran adiga ka hor marka waxaan ku leeyahay habka wariyenimadaada ma saxna waxaan kuu sheegayaa in ay jiraan website-yo kale oo hal dhinac ah marka waxaan kugu la dardaarmayaa in aad kuwaa u shaqatagto